Taariikhda Kooxda Manchester United oo kooban | Gool FM	Thursday, February 11th, 2016	Home
Taariikhda Kooxda Manchester United oo kooban
Published on January 24, 2013 by Gool
Magaca: Manchester United
Naaneysta: The Red Devils
Sanadkii la aasaasay: 1878
Tababaraha: Sir Alex Ferguson
Tirada uu qaado: 76,212
Horyaalka ay ka cayaaraan: English Premier League
Manchester United oo sidoo kale loo yaqaanno ‘the Red Devils’ ama ‘Shayaadiinta Cascas’ waa naadi kubadda cagta ah oo ka ciyaara magaalada Manchester ee dalka Britain. Waxaa la aasaasay sanadkii 1878dii, waxayna noqdeen mid ka mid ah naadiyada ugu awoodda badan taariikhda Ingiriiska, waxayna ka mid yihiin kooxaha ugu taageerada badan, uguna hantida badan adduunka.
Man United waxaa garoonkeeda lagu magacaabaa Old Trafford oo ku yaalla magaalada Manchester. Naadigu wuxuu ku guuleystay koobab badan oo kala ah tiradii ugu badneyd ee horyaalka 1aad ee Premier league-ga, 2 horyaalka heerka 2aad, 11 FA cups, 4 League Cups, 19 Charity/Community Shields, 3 UEFA Champions Leagues, 1 UEFA Cup Winners Cup, 1 UEFA Super Cup, 1 Intercontinental Cup iyo 1 FIFA Club World Cup.
Manchester United waxaa tababare u ah Sir Alex Ferguson, iyadoo kooxda ay aadka u xifaaltamaan ay tahay kooxda ay isku magaalada ka dhisan yihiin ee Manchester City.
Sanadkii 1958dii musiibadii diyaaradda dhacday waxaa ku geeriyooday 8 ka mid cayaaryahannadii Man United. Sanadkii 1968dii Man U waxay noqotay naadigii ugu horreeyay ee Ingiriis ah ee ku guuleystay Koobka Yurub, waxaana kooxda markaasi hoggaaminayay Matt Busby.
Tababaraha haatan ee kooxda Sir Alex Ferguson wuxuu kooxdiisa kula guuleystay 24 koob oo weyn tan iyo markii xilkaasi qabtay sanadkii 1986dii.
Man United waa naadiga ugu hodansan adduunka. Sida uu qiimeeyay wargeyska Forbes ee qiimeeya hantida adduunka, wuxuu tilmaamay in Man U ay ku jirto kaalinta koowaad ee 50ka koox ee ugu qiimaha badan adduunka.
Kaddib markii kooxda ay ku biirtay suuqa lagu iibsado saamiyada ee London ee lagu magacaabo London Stock Exchange, waxaa naadiga iibsaday Malcolm Glazer sanadkii 2005tii. Bishii Agoosto 2012, wuxuu naadigu ku biiray suuqa saamiyada ee New York.
Meesha uu ku yaallo
Goorta dhisiddiisa la billaabay
Goorta la furay
Yaa iska leh
Lacagta ku baxday in lagu dhiso
Inta uu qaado